Konke okuthintekayo ekwakhiweni kwepulazi lomoya | Ukuvuselelwa Okuhlaza
Konke okuthintekayo ekwakhiweni kwepulazi lomoya
IsiJalimane Portillo | | Amandla omoya
Wake wayibona i- eolico Ipaki funcionando. Imishini yomoya futhi izindwani zayo zihamba futhi zikhiqize amandla. Kodwa-ke, ngemuva kwakho konke lokhu, kunesifundo esikhulu semimoya, isikhundla semishini yomoya, amandla adingekayo, njll. Kulokhu okuthunyelwe sizobona igxathu negxathu konke odinga ukukwazi ngokwakha ipulazi lomoya.
Ngabe ufuna ukufunda konke okubandakanya ukukhiqizwa kwamandla omoya?
1 Ukulinganiswa komoya
2 Ukulinganiswa kwendawo
3 Ukubalwa kokusebenza kwepaki
4 Isiteji ngaphambi kokwakhiwa kwepulazi lomoya
5 Izakhi zokwakha
6 Yimiphi imisebenzi yokulungisa ipulazi lomoya elinayo?
Ngokusobala sikhuluma ngakho amandla omoya, ngakho isifundo sokuqala esibaluleke kunazo zonke ukuthi kwenziwa sekwenziwe umoya. Kuyadingeka ukwazi umbuso womoya oshaya endaweni lapho kuzokwakhiwa khona ipulazi lomoya. Akubalulekanga nje kuphela ukwazi uhlobo lomoya okhona, kepha isivinini esivunguza ngaso nobuningi baso.
Izikhathi ezisetshenziselwa ukukala umoya ziyahlukahluka kuye ngenhloso yephrojekthi. Izilinganiso ngokuvamile zikala unyaka owodwa. Ngale ndlela, bagwema ukungaqiniseki kokungalinganiselwa ingxenye ethile yonyaka futhi ngaleyo ndlela babe nokuzethemba okwengeziwe emininingwaneni.
Ukukala umoya udinga iqembu eliqeqeshiwe. Ifakwe ezindaweni eziphakeme ezahlukahlukene ukwazi amanye amapharamitha nge-amplitude enkulu. Izikhundla ezivame ukulinganiswa kakhulu yi-blade tip, i-midrange, ne-hub height. Ngala maphuzu amathathu, amanani omoya anembile futhi alusizo ekwakhiweni kwepulazi lomoya. Lapho nje sekulungiswe imibhoshongo yokulinganisa nemasti, ama-gaji ayabekwa. Imvamisa isetshenziselwa ukukala okuguqukayo njengamadivayisi ama-anemometers, ama-hygrometer, ama-vanes, ama-thermometer nama-barometers.
Kufanele ucabangele usayizi ophelele ipulazi lomoya elingaba nawo, kuya ngesabelomali esitholakalayo. Kungenzeka ukuthi sithole indawo enkulu enolawulo oluhle lomoya olungasibuyisela kahle epaki, kepha singabi nezinsizakusebenza ezanele ukwenza lo msebenzi. Ngakho-ke, kubalulekile wazi ubukhulu bezindawo ezihleliwe uhlelo lokwakhiwa kwephrojekthi, indawo ekhona, izici zomhlaba kanye nokwakheka komhlaba kanye namanye amamodeli ophephela omoya ongawabeka.
Ngokuya ngale mingcele, kufanele sisethe izindawo lapho izinti zizobekwa khona. Umxhumanisi okhethekile kumele abekhona ekwakhiweni kwepulazi lomoya. Lokhu kungenxa yokuthi kubaluleke kakhulu ukuchaza kahle indawo yamamashi nokulungiswa kwawo.
Ukutshalwa kwezimali kumasti okusisiza ukukala imithombo yomoya esinayo kubalulekile esigabeni sokuqala sephrojekthi. Ngaphezu kwalokho, udinga ukuthi lezi zilinganiso zihambisane nemithethonqubo namazinga akhona emhlabeni jikelele.
Njengoba idatha ilinganiswa unyaka wonke, kubalulekile ukugcina ithrekhi enhle yezilinganiso. Noma ngabe insika ifakiwe ngokwamazinga, kungahle kube nohlobo oluthile lwenkinga edinga ukulungiswa. Uma inkinga ingaxazululwa ngokushesha, sizoba nesikhathi ngezilinganiso ezingalungile ezizoholela emaphutheni.
Ukubalwa kokusebenza kwepaki
Ukubala ukuthi ipulazi lomoya lizokwenza kubaluleke kakhulu yini. Ngakho-ke, kufanele kubhekwe izinto eziningi. Enye yazo isilinganiso esifanele semithombo yomoya ngesikhathi somkhankaso.
Lapho umkhankaso wokulinganisa usuphothuliwe, kutholakala i-database ezosebenza kuyo. Ungalinganisa amandla okuqokwa ezoba nawo epaki, izici zemishini yomoya, ukuma komhlaba, njll. Ukusatshalaliswa okulungiselelwe kungenziwa nakwimininingwane etholwe ukubala ukukhiqizwa kwepulazi lomoya. Ngale mininingwane, ungazi ukusebenza ozoba nakho uma imisebenzi efanele isiqediwe.
Ukusebenza kubalwe kulesi sigaba ayicabangi ukulahleka kukagesi okuhambisana nokufakwa okusizayo. Ngesikhathi sokusetshenziswa kwepaki, kwesinye isikhathi kuvela izinkinga ezinciphisa ukusebenza. Noma kunjalo, lokhu akunakubikezelwa. Akunakubalwa ukuthi kuzoba nezinkinga kangaki futhi kangaki eziholela ekwehliseni ukusebenza.
Isiteji ngaphambi kokwakhiwa kwepulazi lomoya
Esigabeni ngaphambi kokwakhiwa kwepulazi lomoya, kubalulekile ukwazisa kahle mayelana izimo zemakethe maqondana nezezimali namanani (CAPEX). Isibonelo, imisebenzi yobunjiniyela edinga ukulahlwa kumele ibe nokuqonda okungcono kwesayithi. Ngaphezu kwalokho, kunezixazululo zobuchwepheshe ezindabeni zobunjiniyela kanye nezingozi ezithile ezihambisana nokungaqiniseki okufanele zihlaziywe. Yonke le datha ivela ekutshalweni kokugcina kwepulazi lomoya.
Ukwazi ngokujula amathuba okuphumelela kwepulazi lomoya, kubalulekile ukwazi uhlu lokuguquguquka kwesimo. Phakathi kwalezi zinto eziguqukayo sithola izimo ze-geological and geotechnical, ezemvelo, ezomthetho nezendawo. Kungenzeka futhi ukuhlaziya ukufinyeleleka kwepulazi lomoya, ngomhlaba nangamachweba, nokwazi izimo zokufinyelela zenethiwekhi.
Ngakho-ke, kubalulekile ukwenza zonke lezi zinhlobo zomsebenzi wokuhlola nokubheka. Akufani nokwakha endaweni ejwayelekile kunasesizeni esisebenza njalo ukuzamazama komhlaba.
Lapho wenza ukwakhiwa kwepaki, kunokwehluka okufanele kubhekwe kuye ngamandla. Ngaphezu kwalokho, futhi kuya ngokuthi zikhona yini izindawo ezingamaxhaphozi noma ezinamatshe nosayizi womoya ophephela.
Umsebenzi wokuqala owenziwe ngowomphakathi (amapulatifomu, izisekelo nemigwaqo). Lo msebenzi uvame ukuthatha phakathi kwezinyanga ezi-4 nezingu-12. Ngemuva kwalokho ukwakhiwa kokuxhuma kunethiwekhi kuqala. Le ngxenye ivame ukuthatha isikhathi eside ngokuya ngobunzima bayo. Imvamisa zithatha izinyanga eziphakathi kuka-6 no-18. Ekugcineni, njengoba imisebenzi yomphakathi iqala ukuqeda, imishini yomoya iyalethwa futhi ihlanganiswe. Ngokuya ngosayizi nobukhulu bepaki, Kuthatha izinyanga eziphakathi kwezingu-12 nezingama-24.
Ukuze sazi ukuthi sidinga abasebenzi abangakanani, kufanele sazi ubukhulu bepaki kahle. Eyodwa enezinjini zomoya ezingama-30 ingakhiwa ngabantu abangama-350. Uma unezinjini ezinhlanu kuphela zomoya, uzodinga kuphela abantu abangama-5.
Yimiphi imisebenzi yokulungisa ipulazi lomoya elinayo?
Njengoba ipulazi lomoya lingaqukethe kuphela ama-turbine omoya, ukugcinwa kwakho konke ukufakwa kuyadingeka. Imisebenzi yokulungisa kanye nezindleko ezihambisana nayo kuzoya ngosayizi wepaki nokwakhiwa kwezinsiza. Izinga eliphakeme esigabeni sokwakha, kwehla izindleko zokulungisa.
Ukuze ube nesethenjwa, ipulazi lomoya cishe lama-30-50 omoya ophephela Ingagcinwa ngabantu abayi-6 (ababili ngumoya ophendulwa ngumoya ngamunye), abanye abantu abangu-2 kuye kwabayi-6 ababelwe ukuxhasa ukugcinwa okwenziwa unyaka nonyaka, umphathi ojwayelekile, kanye nomuntu oyedwa noma ababili ababelwe ukusebenza kwesitshalo esikhiqizayo.
Ngalolu lwazi, ngethemba ukuthi uzofunda konke odinga ukukwazi mayelana namapulazi omoya nomsebenzi abawenzayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » Amandla avuselelekayo » Amandla omoya » Konke okuthintekayo ekwakhiweni kwepulazi lomoya
UDkt Luis Monzon kusho
Usuku oluhle. Ungakanani umhlaba odingekayo kumshini ophephela emoyeni oyi-100 MW?
Phendula uDkt Luis Monzon
UDarci dal wagqoka kusho
Nginezinyathelo, ngidinga iseluleko noxhumana naye ukuze ngiqhubeke nomsebenzi wami womoya
Phendula uDarci dal ponte
Incazelo, ukusetshenziswa kanye nokukalwa kwamandla wekhalori wegesi
Amandla wokunye okufanele uwazi